Yayaa Turee taphataa Aafrikaa ta’uudhaan muudame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Yayaa Turee taphataa Aafrikaa ta’uudhaan muudame
Yayaa Turee, tapahtaa Manchester Siitii, taphataa Aafrikaa bara kanaa ta’uun muudame. Yaayaa Turee yeroo sadaffaaf wolitti aansee badhaasa kana kan argatte. Bara dabre taphtaan kuni goolii 20 kiyyoo keessa marmarsudhaan gareen Manchester Siitii akka Liigii Ingilizii injifatu taasiseera.
Yayaa Turee badhaasa kanaaf kan gahe taphattoota bebbeekamoo kan ta’an Joon Mikaa’el Obii fi Didiyer Dirogbaa injifateeti. Sagantaan badhaasa kanaa magaalaa Leegos Naayjeeriyaatti kan geggeeffame.
Yaayaa Turee taphataa isa lammaffaati seenaa taphattoota Aafrikaa keessatti kan badhaasa kana yeroo 3 wolitti aansee kan injifate. Saamu’eel Itoon kana dura badhaasa kana bara 2003- 2005 jiddutti fudhachuun isaa waan yadatamuudha. Woliigalatti Itoon yeroo 4 badhaasa kana argate. Yaayaanis isatti qixxaayuudhaaf badhaasa tokko kana booda isa barbaachisa jechuudha.
Injifataan badhaasa kanaa kan filatamu lenjistootaa fi daayrektaroota teeknikaa garee biyyoolessaa biyyoota Aafrikaatiin.
Previous articleBurkiinaa Faasoon mootummaa cee’umsaa Mikaa’el Kafaandoon hoogganamu dhaabbatte
Next articleFiilmiin Asaantii Sadaasaa 15 Minisootatti Eebbifame